Ayyaanni Irreechaa biyya Swiidin magaalaa Sundsvaaliitti haala hoo’aan kabajame. - OMN
OMN:Oduu Onk 10,2015 Ayyaanni Irreechaa Biyya Swiidin magaalaa Sundsvall tti har’a kabajamee ooleera. Kabajaa Ayyaana Irreechaa kanaan wal-qabatee, Hayyoonni Oromoo Ayyaana Irreechaatiifi maalummaa Irreechaa irratti waraqaa qorannoo dhiheessuudhaan hirmaatotaaf hubannoo uumaneeran.
Ayyaanni Arreecha biyya Sweden magaalaa Sundsvall, hora Seelomger tti hardha kabajamerratti, uummanni Oromoo biyya Sweden keessaa jiraatan, magaalalee gara garaa irraa walitti dhufuudhaan irreeffataneeran.
Kabajaan Ayyaana Irreechaa kun, akka aadaa Oromootti, eebbaa maangudootiin jalqabamee, sirni irreeffannaa malkatti erga taasifameen duuba, hirmaattonni sirbaa dhiichisaa gara galmaatti deebi’uudhaan ayyaana kabajachaa oolaneeran.
Kabajaa Ayyaana Irreechaa kanarratti, waraqaan qarannoo Irreechaa irratti hubannoo uumu hayyoota Oromootiin kennameera. Hayyoonni waraqaa qorannoo Irreecha irratti dhiheessan keessaa Professor Makuraa Bulchaafi Dargaggoo Caalaa Haayiluu duraati.
Kabajaa Ayyaana Irreessaa kanarratti, walalowwaan garaa garaa dhihaateera, mariin hawaasaa bal’aanille Taasifameera.
Hirmaattonni Kabajaa Ayyaana Irreechaa kanarratti hirmaatan tokkoo tokko yaada kennaniin, uummanni Oromoo akkanatti bahee Ayyaana kana kabajuu isaanitti akka gammadan himaneeran.
Weellisaan Oromoo Haayiluu Kitaabaalle kabajaa Ayyaana Irreechaa hora Malkaa Seelomgeritti kabajame kanaarratti argamuudhaan Sirbaan Ayyaana dabaalee, hirmaatoota bashannansiisaa tureera.
Gabaasaan daani’eel Bariisoo areerii ti.
Boombiin Turkiitti yeroo gara garaa dhohe lubbuu namoota hedduu galaafachuun gabaafame
Amharic News October 10, 2015